E mere Erọn na ụmụ ya ndị nchụàjà (1-37)
Àjà a ga na-achụ kwa ụbọchị (38-46)
29 “Otú a ka ị ga-esi eme ka ha dị nsọ, ka ha wee bụrụ ndị nchụàjà m: Kpụrụ oké ehi, ebule abụọ ahụ́ dị mma,+ 2 werekwa achịcha na-ekoghị eko, ogbe achịcha ndị na-ekoghị eko dị okirikiri a gwara mmanụ, nakwa achịcha ndị na-ekoghị eko dị fere fere a wụrụ mmanụ.+ Ị ga-eji ntụ ọka wit e gwere nke ọma mee ha 3 ma chịnye ha na nkata. Jiri nkata ahụ butere m ha,+ kpụtakwa oké ehi ahụ na ebule abụọ ahụ. 4 “Ị ga-akpọta Erọn na ụmụ ya ndị nwoke n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute+ ma gwa ha ka ha jiri mmiri saa ahụ́.*+ 5 Ị ga-achịrịzi uwe ndị ahụ+ yiwe ha Erọn, ya bụ, uwe mwụda, uwe na-enweghị aka nke efọd ga-adị n’elu ya, efọd, na akpa a na-anya n’obi. Ị ga-ekekwa ya eriri* efọd ahụ gburugburu úkwù ya.+ 6 Ị ga-eke ya ákwà isi ma tinye ihe àmà ahụ dị nsọ* n’ákwà isi ahụ.+ 7 Werekwa mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ+ wụsa ya n’isi ma tee ya mmanụ.+ 8 “Kpọtazie ụmụ ya ndị nwoke yiwe ha uwe mwụda ndị ahụ.+ 9 Ị ga-eke Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ákwà ndị ahụ a na-eke n’úkwù, keekwa ha ákwà isi ndị ahụ n’isi. Ọ bụ ha ga na-abụ ndị nchụàjà, ihe a bụkwa iwu ga-adịgide adịgide.+ Ọ bụ otú a ka ị ga-esi eme ka Erọn na ụmụ ya ndị nwoke bụrụ ndị nchụàjà.+ 10 “Ị ga-akpụtazi oké ehi ahụ n’ihu ụlọikwuu nzute. Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ga-ebikwasị aka ha n’isi oké ehi ahụ.+ 11 Gbuo oké ehi ahụ n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.+ 12 Jiri mkpịsị aka gị rụrụ ọbara oké ehi ahụ tee na mpi ndị ahụ dị n’ebe ịchụàjà,+ wụsakwa ọbara niile fọrọ afọ n’ala ebe ịchụàjà ahụ.+ 13 Werezie abụba niile+ kpuchiri eriri afọ ya, abụba kpuchiri imeju ya, na akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha ma suo ha ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà ahụ.+ 14 Ma ị ga-akpọ anụ oké ehi ahụ na akpụkpọ ya na nsị ya ọkụ n’ebe dị anya n’ebe unu mara ụlọikwuu. Ọ bụ àjà mmehie. 15 “Kpụtakwa otu n’ime ebule ndị ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ga-ebikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.+ 16 Gbuo ebule ahụ ma fesa ọbara ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà.+ 17 Gburisịa ebule ahụ. Saa eriri afọ ya+ na ụkwụ ya ma dokọta ibé anụ ahụ niile na isi ya ọnụ. 18 Ị ga-esu ebule ahụ niile ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma*+ nke a na-esuru Jehova ọkụ. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ nke a na-achụrụ Jehova. 19 “Ị ga-akpụtazi ebule nke ọzọ. Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ga-ebikwasị aka ha n’isi ebule ahụ.+ 20 Gbuo ebule ahụ ma weretụ ọbara ya tee n’ọnụ ọnụ ntị aka nri Erọn nakwa n’ọnụ ọnụ ntị aka nri ụmụ ya ndị nwoke nakwa na mkpịsị aka ukwu nke aka nri ha na mkpịsị ụkwụ ukwu nke ụkwụ aka nri ha. Fesakwa ọbara ahụ n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà ahụ. 21 Weretụ ọbara ahụ dị n’ebe ịchụàjà na mmanụ ahụ e ji ete mmadụ mmanụ+ fesa n’ahụ́ Erọn nakwa n’uwe ya, fesakwa n’ahụ́ ụmụ ya ndị nwoke nakwa n’uwe ụmụ ya ndị nwoke, ka ya na uwe ya na ụmụ ya ndị nwoke na uwe ha wee dị nsọ.+ 22 “Ị ga-ewerezi abụba ebule ahụ, ọdụ ya nke bụ́ abụba abụba, abụba nke kpuchiri eriri afọ ya, abụba kpuchiri imeju ya, akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha,+ na ụkwụ aka nri ya, n’ihi na ọ bụ ebule e ji ahọpụta ndị nchụàjà.+ 23 Sikwa na nkata ahụ achịcha na-ekoghị eko dị na ya nke dị n’ihu Jehova were otu ogbe achịcha dị okirikiri na otu ogbe achịcha dị okirikiri a gwara mmanụ na otu achịcha dị fere fere. 24 Ị ga-achịkwasị ha niile n’ọbụ aka Erọn nakwa n’ọbụ aka ụmụ ya ndị nwoke. Ị ga-efegharịkwa ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova. 25 Ị ga-achịrịzi ha n’aka ha ma suo ha ọkụ n’ebe ịchụàjà ahụ, n’elu àjà ahụ a na-esu ọkụ, ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ọma* n’ihu Jehova. Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ nke a na-achụrụ Jehova. 26 Werezie okpuru afọ* ebule ahụ e ji ahọpụta ndị nchụàjà,+ bụ́ nke a chụrụ n’àjà maka Erọn, ma fegharịa ya ka ọ bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova. Ọ ga-abụzi òkè gị. 27 Ị ga-eme ka okpuru afọ* anụ ahụ e ji chụọ àjà a na-efegharị efegharị dị nsọ, ya na ụkwụ anụ ahụ bụ́ òkè dị nsọ e fegharịrị efegharị nke si n’ebule e ji ahọpụta ndị nchụàjà,+ bụ́ nke a chụrụ n’àjà maka Erọn na ụmụ ya ndị nwoke. 28 Ọ ga-abụ nke Erọn na ụmụ ya. Ọ bụ iwu ndị Izrel ga na-edebe mgbe niile, n’ihi na ọ bụ òkè dị nsọ. Ọ ga-abụ òkè dị nsọ ndị Izrel ga na-enye.+ Ọ bụ òkè dị nsọ ha ga-esi n’àjà udo ha na-enye Jehova.+ 29 “Uwe nsọ+ Erọn ga-abụ nke ụmụ ya+ ndị ga-anọchi ya mgbe e tere ha mmanụ ma họpụta ha ka ha bụrụ ndị nchụàjà. 30 Onye nchụàjà nke ga-esi n’ụmụ ya nọchie ya, bụ́ onye ga-abata n’ụlọikwuu nzute ka o jee ozi n’ebe nsọ, ga-eyi uwe ndị ahụ ruo ụbọchị asaa.+ 31 “Ị ga-akpụrụ ebule ahụ e ji ahọpụta ndị nchụàjà ma sie anụ ya n’ebe dị nsọ.+ 32 Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ga-anọ n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute rie+ anụ ebule ahụ na achịcha ahụ dị na nkata. 33 Ha ga-eri ihe ndị ahụ e ji chụọ àjà ikpuchi mmehie, nke e ji mee ka ha bụrụ ndị nchụàjà ma mee ka ha dị nsọ. Ma onye na-abụghị onye nchụàjà* agaghị eri ihe ndị ahụ n’ihi na ha dị nsọ.+ 34 Ọ bụrụ na e nwee anụ fọrọ n’anụ àjà ahụ e ji họpụta ndị nchụàjà ma ọ bụ achịcha fọrọ n’achịcha ahụ ruo ụtụtụ, ị ga-akpọ ya ọkụ.+ A gaghị eri ya eri n’ihi na ọ bụ ihe dị nsọ. 35 “Ị ga-eme Erọn na ụmụ ya ndị nwoke ihe a niile m nyere gị n’iwu. Ị ga-eji ụbọchị asaa mee ha ndị nchụàjà.+ 36 Kwa ụbọchị, ị ga-eji oké ehi chụọ àjà mmehie maka ikpuchi mmehie. Ị ga-emekwa ka ebe ịchụàjà ahụ dị nsọ. Otú ị ga-esi eme ya bụ ịchụrụ ya àjà ikpuchi mmehie, ị ga-etekwa ya mmanụ ka i wee mee ka ọ dị nsọ.+ 37 Ị ga-eji ụbọchị asaa chụọ àjà ikpuchi mmehie maka ebe ịchụàjà ahụ. Ị ga-emekwa ka ọ dị nsọ ka o wee bụrụ ebe ịchụàjà kacha nsọ.+ Onye ọ bụla ga-eje ozi n’ebe ịchụàjà ahụ* kwesịrị ịbụ onye dị nsọ. 38 “Ihe ndị a ka ị ga-achụ n’àjà n’ebe ịchụàjà ahụ mgbe niile: ụmụ ebule abụọ ndị gbara otu afọ otu afọ kwa ụbọchị.+ 39 Chụọ otu ebule n’àjà n’ụtụtụ, chụọkwa ebule nke ọzọ n’àjà ná mgbede.*+ 40 Ihe ndị ị ga-eji chụọ ebule nke mbụ n’àjà bụ otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin* mmanụ oliv, nakwa otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin mmanya nke ga-abụ àjà mmanya. 41 Ị ga-achụ ebule nke abụọ n’àjà ná mgbede.* Ị ga-eji àjà ọka na àjà mmanya ga-adị ka nke ụtụtụ chụọ ya. Ị ga-achụ ya n’àjà ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ọma,* bụ́ àjà a na-esu ọkụ nke a na-achụrụ Jehova. 42 Ọ ga-abụ àjà a na-esu ọkụ mgbe niile n’ọgbọ unu niile, n’ihu Jehova, n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, bụ́ ebe m ga-apụta n’ihu unu gwa gị okwu.+ 43 “M ga-apụta n’ebe ahụ n’ihu ndị Izrel, ebube m ga-emekwa ka ebe ahụ dị nsọ.+ 44 M ga-eme ka ụlọikwuu nzute nakwa ebe ịchụàjà dị nsọ, m ga-emekwa ka Erọn na ụmụ ya ndị nwoke dị nsọ,+ ka ha bụrụ ndị nchụàjà m. 45 M ga-ebinyere ndị Izrel, m ga-abụkwa Chineke ha.+ 46 Ha ga-amatakwa na m bụ Jehova bụ́ Chineke ha, onye kpọpụtara ha n’Ijipt ka m wee binyere ha.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke ha.
^ Na Hibru, “ma jiri mmiri saa ha ahụ́.”
^ Ma ọ bụ “ihe ísì ya na-eme ka obi jụrụ.”
^ Na Hibru, “onye mbịarambịa,” ya bụ, nwoke na-esighị n’ezinụlọ Erọn.
^ Na Hibru, “ga-emetụ ebe ịchụàjà ahụ aka.”